မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သောင်းတန် ထွက်ရှိတော့မည် ~ Myanmar Express
လက်ရှိ တရားဝင် လှည့်လည် သုံးစွဲလျက် ရှိသော ငွေစက္ကူများနှင့် ငွေအကြွများသည်လည်း တရားဝင် သုံးစွေဲငွ အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ Myanmar Express Posted in: သတင်း
.it is just rumor n u have only it to shake the mind of our people. sorry, it take back n keep in ur mind ever. k
ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ၅၀၀၀ တန်ထုတ်ဝေတာတောင် လွန်လှပါပြီဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျပ်ငွေရဲ့တန်ဖိုး ပိုမိုဖောင်ပွလာမှာ စိုးရိမ်မိလို့ပါ.........
[image: Photo: မြန်မာ-အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေး ကောင်စီရုံးများကို အမေရိကနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ကြီးသုံးမြို့တွင် တည်ထောင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန...
ပုဂံ မြစည်းခုံဘုရားတွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသည့် ဆင်းတုတော်တစ်ဆူ ခိုးယူခံရ
[image: Photo: ပု။ ပုဂံသစ္စာ]
ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းရှိ ဝက်ကြီးအင်းရပ်အနီး ဧရာဝတီမြစ်နံဘေးတွင်
တည်ရှိသော မြစည်းခုံ ဘုရားတွ...